XL + ACCOUNT - Yakakosha Mitemo uye Mamiriro | FXCC
XL + ACCOUNT - Yakakosha Mitemo uye Mamiriro
musha / XL + ACCOUNT - Yakakosha Mitemo uye Mamiriro
Unobvuma kuti nekutora chikamu muKusimudzira ("Kusimudzira"), iwe unofanirwa kusungirirwa neaya mamiriro (aya "ma" Terms ") pamwe neAcustomer Chibvumirano uye Investment Services General Conditions, pamwe nemamwe ese Bhizinesi mazwi uye mamiriro anoshanda. kumaakaunti ako okutengesa.
Uku kukurudzira kuchatanga musi wa1st Dai 2020
Iyi Kusimudzira inoshanda for FXCC nyowani uye iripo Vatengi uyo:
akange averenge nekugamuchira aya mazwi nemamiriro
vanosarudza kusarudza-kupinda kutora chikamu mu kukurudzira nekutaura pachena kusimbisa kwavo chisarudzo nekuendesa chikumbiro neemail at accounts@fxcc.net
vhura uye shandisa iyo XL + account kuburikidza nekuita yakaderera dhipoziti nebhangi waya.
havasi kutora chikamu mune chero kukwidziridzwa neFXCC.
Iko kuderedzwa kudiki kwakaitwa neMutengi mutsva pasi pekusimudzira uku: zviuru zvitatu muClient's XL + account
Iyo diki yekuisa pasi neiyo iripo Mutengi pasi pekusimudzira iyi kusimudzira kuXL +:
Madhora chiuru (kana mari iripo yeMutengi iri pamusoro pemadhora zviuru zviviri); kana
Madhora zviuru zviviri (kana mari yemutengi iripo iri pakati pemadhora zviuru zviviri - $ zviuru zviviri); kana
Madhora zviuru zvitatu (kana mari iripo yemutengi iri pasi pemadhora zviuru zviviri)
Kubviswa kwebhadharo uripo uye kutumazve zvakare hakuzotorerwe semari mitsva.
Yese deposits kune XL + ichave mune USD mari uye inogadzirwa nebhangi waya.
Upamhi hwepamusoro we XL + account ndeye 1: 200
Vatori vechikamu chekusimudzira uku vanogona chete imwe XL + account.
Chikamu chemubereko chinotarwa zvichibva pane avhareji yezuva nezuva kuenzana yeClient's XL + account yeAkarenda mwedzi. Izvo zvinofanirwa kunyatsocherechedzwa kuti chiyero chemari inoverengwa uye inobhadharwa yeiyo chete yakaenzana muClient's XL + yekutengesa account inowanikwa mu MT4 yekutengesa chikuva, chero mari inowanikwa muChitupa chikwama (s) kana imwe nhoroondo yekutengesa (s) haina kodzero kune chero kubhadhara mubereko.
Zuva rega rega panguva dzinenge 23:59 MT4 Nguva, chinyorwa chinotorwa chakaenzana neye Client's XL + account. Izvi zvinowedzerwa kumusoro uye zvinopatsanurwa nehuwandu hwemazuva ari mumwedzi yekarenda
Wese Mutengi ari kutora chikamu mukukwidziridzwa uyu ane kodzero yeChidimbu Chekushandisa (Runhare kana Tebhenekeri) sechipo kubva kuFXCC yekubatsira Mutengi kuti arambe achibatika chero Mutengi achisangana nezvinodiwa zvekugadziriswa sezvakarongedzwa kuburikidza nemitemo yekusimudzira.
Mubairo wekufarira unosiyana zvichienderana neyakaenzana zuva nezuva muClient's XL + account uye yakaunganidzwa yakatengeswa vhoriyamu yekarenda mwedzi wapfuura sezviri pasi apa:
Avhareji yezuva nezuva kuenzana
Zvishoma zvinotengesa pamwedzi
Wana Yakabatanidzwa - Chipo cheMahara chipenga
* kuti uve unofanirwa zvizere nemushandisi, Mutengi anofanira kutengeserana nguva zhinji uye kusangana nemitengo yepamwedzi inodikanwa pamwedzi mitanhatu.
Chiyero chekubhadhara mubairo chichaverengerwa mukati memazuva mashanu ekushanda emwedzi yekarenda yemwedzi wepamberi uye ichaverengerwa zvakananga muClient's XL + account seyakagadziriswa basa idzva.
Chero chiratidzo chechinyengeri, kushungurudza kana dzimwe nzira dzekunyengera kana dzehunyengeri mune chero Client's XL + account, kana neimwe nzira ine hukama kana yakabatana neiyo XL + Akaunti ichaita kuti Mutengi abatsirwe pane zvese zvakanaka zvinopihwa pasi peiyi Kurudzira.
FXCC inochengetedza mvumo yekuchinja chero XL + Akaunti ku "Akaundi Akaundi" nekufunga kwayo, pasina chikonzero chekupa chero ruramisiro kana kutsanangura zvikonzero zvekuchinja kwakadaro.
Chero kukakavara, kududzira zvisirizvo kwezvakanyorwa pamusoro apa neMamiriro neMamiriro kana mamiriro akasimuka uye asina kuvharwa neiyi Kurudziro Mirairo neMamiriro ezvinhu, nharo dzakadaro kana kududzirwa zvisirizvo kuchagadziriswa neFXCC nenzira yainofunga seyakanaka kune vese vanobata. Icho chisarudzo chichava chekupedzisira uye / kana kusungira kune vese vanopinda. Hapana tsamba inozopindirwa.
FXCC inochengetera kodzero yekuramba kubhadharwa kwemari yegore negore sekufunga kwayo pasina chikonzero.
FXCC inochengetedza kodzero, sezvinongova muuchenjeri wayo chete inoona yakakodzera, kuchinja, kuchinja, kuwedzera, kusimudzira, kubvisa kana kugumisa Kukurudzira, kana chimwe chinhu chekusimudzira, chero nguva uye pasina chero chiziviso chisati chaitika. Pasinei nemamiriro ezvinhu FXCC inofanira kuve nemhosva kune mimwe migumisiro yekuchinja kupi zvako, kuchinjwa, kusimudzirwa, kubviswa kana kupera kwekusimudzira.
Kurudziro iyi inorongwa uye inofambiswa neCentral Clearing Ltd, Law Partners House, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu uye inowanikwa kune Vatengi vanogara munzvimbo dzisiri dzeEuropean Jurisdictions.
Mari yemwedzi yemwedzi yevhareji inoverengerwa maererano negwara rinotevera:
%, mwedzi = (avhareji zuva nezuva kuenzana) * mazuva * Chiyero chemufaro / 100/360, kupi
Avhareji kuenzana: avhareji zuva nezuva kuenzana kwevatengi XL + account yemwedzi yakapfuura;
Chikamu chemubereko - mubairo wemari sezvakatsanangurwa mundima 11;
360 - Nhamba yemazuva pagorenda.
mazuva - Nhamba yemazuva mumwedzi yekarenda.
kureva mwedzi wega wekarenda inoongororwa nemazuva makumi matatu, uye gore rega rega riine mazuva makumi matatu nematanhatu.
Get Yakabatanidzwa - Yemahara Dhiza Kukodzera:
Mutengi anogadzira uye anoshanda XL + account inokodzera kune mumwe chete wemahara mudziyo (kana mutengo wakaenzana wemuchina) sezviri pasi apa:
Apple iPhone 11 kana Samsung Galaxy S10 + (kana yakaenzana mari inoita zviuru zvemadhora)
XL + Akaunti ine madhora madhora zviuru gumi;
Sarudza mhando yaunofarira nekutumira email ku accounts@fxcc.net
Tichaendesa nhare yako yaunoda kune yako kero;
Shamba nguva zhinji kwemwedzi mitanhatu uye sangana pamwedzi mashoma ezvitengesi sezvakatemwa mundima 11
Apple iPad Air / Samsung Tablet S5 (kana yakaenzana $ 500)
Tichaendesa wachi yako yaunoda kukero yako;
Chishandiso ichi chinozotumirwa kukero yako mukati memazuva mashanu eXL + yako activation uye ichiti chipenga.
Iyo mudziyo uchaendeswa kune kero yawakaratidza panguva yako kunyoresa account neFXCC
Pangangoiswa chishandiso, iwe unobhadhara mutero wekubhadhara uye kumwe kubhadharwa kwekumanikidzwa kwakaiswa nezviremera zvako zveHurumende.
Chete XL + maakaunzi anozadza dhipoziti uye mashoma emwedzi anotengeswa maitiro anozove akakodzera zvakakwana mubairo.
Mutengi anogona kuwana chete mudziyo (kana mutengo wake wakaenzana) panguva yekusimudzirwa.
Mutengi anokodzera kubvisa chero mari inogadzirwa pasina chero zvadzinotadzisa, zvisinei kubvisa mari yekutanga yakaiswa kuti ishandise XL + account (kutamisa kwemukati kubva kuXL + kuenda kune wallet) kuchaita kuti mudziyo unofanirwa ubviswe serimwe ndima inotevera.
Kana Mutengi asingakwanisi kutevedzera mazwi uye mamiriro ekusimudzira (akadai sekubviswa kweiyo mari yekutanga dhipozita (kureva kuendesa mukati meongororo yekutanga dhipo kubva kuXL + kumashure kune chikwama) usati wasangana nezvinodiwa zvekutengesa, kana kusangana izvo zvinotarisirwa pamwedzi zvekutengesa kana chero chimwe chikonzero), FXCC, maererano nenjere yayo, inobvisa mutengo wakaenzana wechigadzirwa mumari inowanikwa yeMutengi.
FXCC inochengetera kodzero kwayo kwayo, kuti:
Dzivisa mutengi wevanotora chikamu mukusimudzira pasina chikonzero chekupa chero ruramisiro kana kutsanangura zvikonzero zvekuderera kwakadaro.
Regedza chero mutengi anotyora kukwidziridzwa Mitemo uye / kana chero yeFXCC mamiriro uye mamiriro.
Isa mutengo wakaenzana nemutengo muClive's XL + account pane kutumira iyo chaiyo kuresi yeVatengi.
Chero chiratidzo kana kufungidzira, mukufunga kweFXCC zvine hungwaru, zvemhando ipi neipi yekushungurudza, kunyengedza, kana kunyengera, zvichaita kuti mutengi arege basa uye asava pamutemo chishandiso (tarira ndima 26. Pamusoro).
FXCC inochengetera kodzero, sezvairi mukufunga kwayo kwayo senge yakafanira, kushandura, kugadzirisa, kumisa, kudzima kana kupedzisa kukwidziridzwa, kana chero chinhu chekusimudzira, chero nguva. FXCC haisungirwe kukuyambira iwe nezve shanduko mukukwidziridzwa. Mutengi anosungirwa kutevedzera zvese mutemo uye mamiriro ekusimudzira, pamwe nekutarisa chero shanduko.
Kusawirirana kupi zvako, kusanzwisiswa kwemashoko aya pamusoro apa anoshanda kana mamiriro ezvinhu akabuda uye asina kuvharwa neMitemo neMitemo iyi, mhirizhonga yakadaro kana kushandurwa zvisiri izvo ichagadziriswa neFXCC nenzira iyo inofunga kuti ndiyo yakanakisisa kune vose vanofunga. Icho chisarudzo chichava chekupedzisira uye / kana kusunga kune vose vanopinda. Hapana nhaurirano ichapinda.
Kubatanidzwa mukukwidziridzwa kunoreva chokwadi chekuziva uye kubvumirana nemitemo yaro nemamiriro ezvinhu.
Ichi chishandiso chiri pasi pekusimudzira uku chichagoverwa neCentral Clearing Ltd, Law Partner House, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu uye inowanikwa kune Vatengi vanogara munzvimbo dzisiri dzeEuropean Jurisdictions.